सरकारविरुद्ध साउदीमा नाराबाजी, ओलीलाई देश छाड्न चेतावनी ! - नेपालबहस
सरकारविरुद्ध साउदीमा नाराबाजी, ओलीलाई देश छाड्न चेतावनी !
| १८:२८:१८ मा प्रकाशित
२३ भदौ, काठमाडौं । साउदी अरेबियामा नेपाल सरकारविरुद्ध प्रवासीले नाराबाजी गरेका छन् । रियादमा रहेको सेमास्को कम्पनी परिसरमा आइतबार नेपाली श्रमिकले नेपाल सरकारको विरोधमा नाराबाजी गरेका हुन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाली समेत गरेका छन् । ‘केपी ओली, देश छोड’ भन्दै अलपत्र परेका नेपाली प्रवासीले नाराबाजी गरेका थिए । रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किन विमान कुरिरहेका ती श्रमिकले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् ।
सुरुमा कम्पनीका अधिकारीसँग आफ्ना समस्या राखेपछि उनीहरुले दुतावासमा पनि गुनासो पोखेका थिए । तर कम्पनी र दुतावासले नेपाल पठाउन आनाकानी गरेपछि उनीहरुले नाराबाजी गरेका हुन् ।
मंगलबार नेपाल उड्ने योजना बनाएका उनीहरु कम्पनी र दुतावासले धोका दिएपछि सार्वजनिक नाराबाजीमा उत्रिएका हुन् । साथै उनीहरुले ‘नेपाली दूतावास खारेज गर’ भन्दै नाराबाजी गरेका छन् ।
बर्दिवास अस्पताललाई पीपीइ सेट बक्स १० मिनेट पहिले
आजै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सम्भावना १३ मिनेट पहिले
बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न माग: डिला सङ्ग्रौला २९ मिनेट पहिले
मन्त्रीको नाम टुंग्याउन ओली प्रचण्ड छलफलमा ! ३० मिनेट पहिले